isilawuli Ukristu e China | Apg29
Kukhona manje usukhona China ingakhipha Cishe iningi kungangenisi - it is a uhlelo lokulawula ukuthi cishe akekho oye wakwazi ukucabanga.
Akufanele ngempela kusimangaze lokhu uhlelo lokulawula, okuyinto manje Chinese ziphoqelelwa ukuba ziphile nge. Kuyinto ngoba kahle nge isithombe sokuthi izwi lesiprofetho usinike umbono.
Ukuze uthole umbono wokuthi lokhu, nje sibheke izithombe ukuthi sibeka lapha. Izithombe ezimbili kukhona isihenqo zokulahla kusukela Document SVT sika esekelwe okuyinto senza ngo-Okthoba 7.
yizigidi ezingu-600 okuqapha
Ekupheleni kohlelo SVT sika abonisa indlela uhlelo lokulawula ithumba bonke laba bantu Chinese, kungakhathaliseki ukuthi ukuhamba, bike noma ukushayela imoto - azibanga nakho ukuphunyula. Uhlelo kakade athuthukiswe kahle, futhi cishe ngemva konyaka, kuyoba baseChina ezinkulu iyahlolwa by ababalelwa ezigidini ezingu-600 (!) Amakhamera.
China Social Credit ubhala ukuthi lesi simiso kuzovumela ezinokwethenjelwa azulazule ngokukhululekile esibhakabhakeni, kanti lokho kwenza kube nzima kubantu ababedinga usizo ukuze bakwazi ukuthatha isinyathelo esisodwa. Bangakwazi ngokuphelele ayifakiwe umphakathi.
Manje abezindaba emhlabeni baqala uvuka ngoba okwenzekayo e-China. In isihloko Swedish TT, ishicilelwe emaphephandabeni ehlukahlukene ngo-Okthoba, ubhala mayelana ngokoqobo kwabantu Chinese manje uhlala ne:
"Round ukuqapha iwashi inhlanganisela ukuqashelwa ubuso, ukuhlaziywa idatha, imisebenzi inthanethi nokuziphatha kwezomnotho. Usebenzisa ubuchule obuphezulu kanye womuntu ukuphazamiseka angathembela sika credit social value up, amaphuzu olusha ngesikhathi sangempela futhi kubalulekile ukuze umuntu ngamunye nomndeni wakhe. "
Sicela ufunde lokhu futhi! Kungaba nzima ukuthatha e, iqiniso lokuthi kufanele aphathelane nalokhu. Lapha kukhona ukukhuluma ke mayelana ukugadwa ubusuku nemini!
Bhalisiwe e uhlelo amaphuzu
Ngaphezu kwalokho, zonke ezilotshwe uhlelo amaphuzu, okuyinto "kubalulekile umuntu ngamunye nomndeni wakhe." Lokhu kusho ukuthi hhayi kuphela kuthinta umuntu, kodwa futhi wonke umndeni.
Umuntu oye wahlala eChina babike ukuthi Kwaziwa kahle kamhlophe ukuthi i-hardware ekhethekile sifakwe wonke amafoni Chinese. Ngale ndlela, iziphathimandla ukulalela lokho okushoyo uma ukhuluma ocingweni.
Ngaphezu kwalokho, iziphathimandla ziye futhi ungakaqali ukurekhoda amasampula izwi izakhamuzi. Ngakho wenza sikwazi ukunquma lokhulumako lapho oqondayo.
AmaKristu ayehlala ukulawula nzima
Ngokombono Christian umbono, kungenxa amaKristu isivele nzima kakhulu ukuphila nalesi control. Ingabe umbuso Chinese ke ku ekusebenziseni kwawo amandla ukuze uthole izakhamuzi ezithembekile, ungakwazi ukholo lobuKristu livinjelwe. Kuyobe sekuba khona ngeke kube yinkinga iziphathimandla ukuba ngakususi konke kwabo imisebenzi emphakathini, futhi ngaleyo ndlela kukwenza kungenzeki ukuba uphile ukuphila okuvamile.
Uhlelo anti-Christian ukulawula ngubani ozothola sithengiselane, ezichazwe isiphetho IsAmbulo 13 isahluko sika, usuyafezeka.
Uma noma ubani engayithandi kokungabaza ukuthi lokhu kuyoke kube ukusebenza noma ukuthi izinsizakusebenza ezikhona ukuyifinyelela manje ngalesi sikhathi, ungakwazi manje udedele ukungabaza kwabo. Manje sekuyisikhathi baphaphame futhi ayeke bephika iziprofetho zeBhayibheli.
Ukugcwaliseka incazelo engokwesiprofetho
olufanele nakakhulu ukuqala ukufundisa nokushumayela ngalokhu, ukuze wonke amaKristu engabashumayeli usuyaziqaphela kude kangakanani sesihambe ekugcwalisekeni incazelo engokwesiprofetho ezitholakala eBhayibhelini.
Manje ukuthi abezindaba yezwe kufakazela lokho selivele likhona futhi sisetshenziswa, akufanele kube nzima ukukholisa kokubili amaKristu kanye nabangewona amaKristu mayelana igama eliseBhayibhelini nokwethenjelwa.
Into ebaluleke kakhulu ukuba bamukele uJesu njengoMsindisi wabo siqu ukuze ningabi yisisulu Umphik'ukristu umbuso wakhe. Kuyinto ebalulekile ibaluleke iphakade!
Vecka 21, torsdag 23 maj 2019 kl. 05:53